Fitaterana :: Homena tombony ireo mpianatra hamonjy fianarana • AoRaha
Fitaterana Homena tombony ireo mpianatra hamonjy fianarana
Ho lohalaharana amin’ny fanomezana alalana amin’izao fiverenan’ny fitaterana amin’ny lalam-pirenena izao ireo mpianatra handeha hamonjy fianarana, manomboka ny zoma 4 jona 2021, araka ny fanambaran’ny Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety (ATT). Efa raikitra ny fandraisan’ny kaoperativa tsirairay ny famandrihantoerana, amin’izao fotoana izao.
Anisan’ireo fandaminana napetraky ny ATT ny hamerenana eny Tsinjony, ny faran’ny zotra F (RN7) ary eny Imerintsiarosika ho an’ny zotra G (RN1). Misy ny birao fandraisana manokana eny amin’ny gara Maki Andohatapenaka izay hanamora ny fikarakarana ny taratasin’ny fiara, nanomboka omaly hatramin’ny alakamisy.
Hatao ihany koa ny fampahatsiahivana an’ireo mpamily sy mpiasan’ny kaoperativa momba ireo fihetsika ara-pahasalamana sy ny fitandremana manoloana ny aro lozan’ny fifamoivoizana. Rahampitso no hanaovana ny fanarahamaso amin’ny fahavononan’ireo toby fiantsonana rehetra ara-pitaovana sy ara-pahasalamana.
Notsindrian-dry zareo avy ao amin’ny ATT ny tsy fihetsehan’ny saran-dalana rehetra sy ny isan’ny mpandeha mipetraka amin’ny laharan-tseza.
Fiverenana fisokafana :: Manome antoka ny mpanjifa ireo mpitantana « Hotel-hopital »